काठमाण्डौ उपत्यकामा होटल क्षेत्रमा एक बर्षमापनि बिक्रि नभएको क’ण्ड’म ३ दिनमा बिक्रि ! - jagritikhabar.com
काठमाण्डौ उपत्यकामा होटल क्षेत्रमा एक बर्षमापनि बिक्रि नभएको क’ण्ड’म ३ दिनमा बिक्रि !
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले धेरै कुराको प्रभाव पारेको देखियो । काठमाडौको होटल तथा गेष्टहाउस क्षेत्रमा क’ण्ड’म र ग’र्भ नि’रो’ध’क सा’ध’नहरुको अ’त्या’धि’क बि’क्रि भएको पाइएको छ ।
सुनधाराको एक औ’ष’धि पसले नै च’कि’त बनेका छन् । हिँजोदेखि एक बर्षमापनि बिक्रि नभएको क’ण्ड’म मैले २४ घण्टामा बिक्रि गरेको छु । अ’न्य ग’र्भ नि’रो’ध’क साधन किन्नेकोपनि कमि छैन । राति किन्न नपाएपछि भएको गल्ती सुधार्न बिहानै इमरेजेन्सी क’न्ट्रासे’फ्टी लिन आउनेहरुको संख्यापनि उच्च छ ।
यो कांग्रेसकै महाधिवेशनको प्रभाव त पक्कै हो । किनकी अधिकांश होटलहरु नेपाली कांग्रेसले बुकिङ्ग गरेको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण लामो समयदेखि धराशायी बनेका संघीय राजधानी काठमाडौंका होटल व्यवसायीहरु भने यतिबेला दंग छन् । उनीहरुका होटल पाहुनाले भरिएका छन्।
कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताले राजधानीका होटल तथा गेस्टहाउस भरिभराउ भएका हुन्। पछिल्लो समय पर्यटकको आवागमन बढेसँगै जारी राजनीतिक दलका महाधिवेशनले पर्यटन क्षेत्रसमेत चलायमान भएको छ।
अध्यागमन विभागको तथ्यांकले विदेशी पाहुना बढेको देखाइरहँदा यता राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका पाहुँनालेसमेत होटलक्षेत्र चलायमान भएको देखिन्छ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाटै होटल बुकिङ बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। राप्रपाको महाविधेनका लागि पार्टीले राजधानींका झन्डै ४५ सय बेड बुक गरेको थियो।
त्यसो त अहिले काठमाडौंका ठुला होटलमा दैनिक ठूला सभा, गोष्ठी, सेमिनार,सम्मेलन, वार्षिक सधारण सभालगायत कार्यक्रम हुने क्रम बढेको छ। अहिले राजधानीका पार्टी प्यालेसदेखि होटलका साना तथा ठूला हल एक साताअघि नै बुक हुन थालेका छन्। विवाहको महिना भएकाले अहिले राजधानीमा रोजेकै पार्टी प्यालेस वा होटलमा बुकिङ पाउनसमेत मुस्किल देखिएको छ।
दसैंयता होटल क्षेत्र विस्तारै चलायमान हुन थालेपछि श्रमिकको समेत माग बढेको छ। होटल बुकिङको अकुपेसी हेर्दा यो क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्केको हो कि भन्ने अवस्थासमेत देखिएको छ।
अहिले राजधानीका सुन्धारा, ठमेल,गौशाला,कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क, पुरानो बसपार्क, बागबजारलगायत धेरै होटल तथा गेस्टहाउस भरिभराउ देखिन्छन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिका लागि सयौं बेड बुकिङ गर्दा व्यवसायी हौसिएका छन्।